Daawo Sawiradda : Dhismaha Cusub ee Safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia oo si rasmi ah loo furay. – idalenews.com
Daawo Sawiradda : Dhismaha Cusub ee Safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia oo si rasmi ah loo furay.
Waxaa si rasmi ah xarigga looga jaray dhismaha cusub ee Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto , kaasoo ku yaala Magaalada Kuala Lumpur ee Caasimadda dalkaMalaysia dalka, waxaana xafladda lagu furayay dhismaha cusub ka soo qeyb galay qeybaha kaladuwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi .
Xafladda oo si heersare ah loo agaasimaya ayaa hadal kooban waxaa ka jeediyay Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uga wakiilka ah dalka Malaysia ambassador Nur Farah Hersi oo uga mahadceliyay qaban-qaabiyaasha xafladda iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi , isagoo ugu baaqay inay horseed u noqdaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed , waxa uuna xusay in Soomaaliya ay hiigsaneyso mustaqbal iftiin badan oo afjaraya waqtigii dheeraa ee colaada iyo mugdiga .
Danjire Nur Farah Hersi ayaa sheegay inay yihiin Wakiilo fulinaya ajandaha iyo danaha qaranka , ayna yihiin u adeegayaasha ummadda Soomaaliyeed , isagoo ka codsaday dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi inay la jaan-qaadaan hanaanka cusub ee Safaaradda ay howsha u wado , ayna taageeraan dowladda Federaalka Soomaaliya .
Xafladan oo uu ka dhexmuuqday Mudane Jibril Mohamed Osman oo ah Kuxigeenka Safiirka ahna lataliyaha koowaad ee Safaaradda Soomaaliya ee Malaysia iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa waxaa ay ku idlaatay jawi farxad iyo reyn-reyn leh .
Daawo Sawiradda : Taageerayaal dagaalamay Shalay Liverpool
Madaxweynaha Soomaaliya oo u dhoofay Jabuuti.